Fampiroboroboana SEBIC China 20 milina fametahana bisikileta elektrika sy mpanamboatra | Funncycle
Fanamarinana CE TUV
Laharana maodely BEF-RH20
Fork Aluminium TIG nohosorana 20 ″
Izany rehetra izany dia mandeha amin'ny alàlan'ny batterie 36v 7.8ah, izay azo ampidirina amin'ny vidin'ny bisikileta na tsia.
Miaraka amin'ny lamba Shimano 7 dia azonao atao ny misafidy kojakoja ahazoana aina ary misafidy ny haavon'ny fanampiana ilainao.
Ny eLife Infusion dia manana fomba mandeha an-tongotra 6km, izay ahafahanao manosika ny bisikiletanao mora foana eny an-tampon'ny havoana na havoana.
Tena hahatsapa ny herin'ny Infusion indrindra ianao rehefa tonga any amin'ny havoana iray ary manomboka miadana. Ny havoana dia hahatsapa ho mendri-piderana ary ho afaka hijery bebe kokoa amin'ity bisikileta elektrika ity ianao.
Ny Infusion mitaingina kodiarana 20 ″ CST. Natao tamina fampiononana tao an-tsaina, ny seza azo ovaina dia manome fanamorana sy faran'izay betsaka kokoa aza.
Ny lasely fampiononana dia voasokitra manokana ho fampiononana fanampiny, mahatonga ny eLife Infusion ho be dia be amin'ny dia lavitra. Midika izany fa ho rivotra ny mitaingina kilaometatra maro hafa! Ny Infusion dia vita miaraka amina fotaka feno vy mba hiarovana ny bisikiletanao amin'ny diany.
Misy koa ny fijanonana mafy ilaina amin'ny kitra ho fitehirizana sy fijanonana mora.
Teo aloha: SEBIC enduro afovoany mitaingina môtô lalana
Manaraka: SEBIC 26 inch etro snow beach matavy kodiarana bisikileta herinaratra